5 Best Saffarada Day From Amsterdam By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Saffarada Day From Amsterdam By tareenka
5 Best Saffarada Day From Amsterdam By tareenka
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo
(Last Updated On: 28/08/2021)
Amsterdam waa magaalo cajiib ah in ay booqasho. Waxaa jira aad u badan si ay u arkaan iyo samayn halkan in aad doonaa laga yaabaa in marnaba is caajisaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli noqon lahaa weyn ilaa qaso wax. Saas waxaa ugu wacan Amsterdam sedani tahay bilaw weyn dhowr safar maalin la yaab leh.
Sidaas, haddii aad rabto si ay u tagaan oo ku saabsan qaar ka mid ah safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Amsterdam, aad leedahay si aad doorato meel sax ah. In this article, aan dabooli doonaa shan safarada maalin top aad qaadi karto ka Amsterdam. Sidoo kale, waxaan idin siin doonaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay iyo sida ay u gaaraan meelahan tareen. By dhamaadka waslad, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga bilowdo xiise cajiib ah Amsterdam!
Rail Transport Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. London: Mid ka mid ah Aad u Fiican Saffarada Day From Amsterdam!
Marka la go'aaminayo in ay tagaan safar maalin ka Amsterdam a, dadka intooda badan doorato wax u dhow. Waxa ku soo xusuusan yihiin magaalooyinka dalka Netherlands, Belgium, iyo waxaa laga yaabaa in Germany. Si kastaba ha ahaatee, ay dhif go'aansato in aad si London tag.
Waxaan aragnaa, tani waa mid ka mid ah safarada maalintii ugu fiican ka Amsterdam oo aad qaadi karto. maxaad? Saas waxaa ugu wacan safar maantadan la joogo waxaa inta badan iska fududaysto. Sababtaa awgeed, waxaad heli kartaa a waayo-aragnimo u gaar ah aan kaaftoomi ee dalxiisayaasha aad u tiro badan jiidhaya aad boos.
On top of in, London waa magaalada weyn leh wax badan oo xiiso leh si ay u arkaan iyo samayn. Plus, Oo waxaa ka buuxa taariikhda iyo naqshadaha yaab. Haddii aan oo dhan in, fursad ay ku gudbin dureeri aad sidoo kale ka heli doontaa caanka ah Ingiriisi Channel.
Haddii aad go'aansato in ay tagaan, halkan waa wax yar info ah oo aad u baahan tahay oo ku saabsan tareen kortaan. Waxay qaadataa qiyaastii afar saacadood in ay gaaraan London via tareenka. Waa yara dheer, laakiin sida dad badan u safraan meelo fog si siman ka Amsterdam, waa in ka badan macquul ah. All aad u baahan tahay in ay sameeyaan waa hore bilowdo iyo goor dambe soo noqon, oo aad ku dhamaan doonaa isagoo maalinta oo dhan ee London.
Tareenadu Amsterdam Si London
Paris si Tareenada London
Berlin si Tareenada London
Brussels si Tareenada London
2. used: Halkee cirfiid SHEEKADII The Bilaabasho
Waxaynu wada ognahay in quruxda Amsterdam inta badan been in kanaalada iyo naqshadaha. Si kastaba ha ahaatee, ma ogtahay in dhammaan jirta Bruges, Belgium? Ka dib oo dhan, waa Bruges waxay ugu yeedhaan Venice ee Waqooyiga, ma Amsterdam!
Waa maxay more, Bruges ma aha oo kaliya uu leeyahay oo dhan, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Sheeko cirfiid magaalooyinka oo dhan of Europe. Taas ayaa ka dhigaysa safar waxaa mid ka mid ah xalka ugu wanaagsan ee safarada maalinta ka Amsterdam.
Haddii aad go'aansato in aad si Bruges tago, aad fursad u heli doona in ay ula yaabsan qaar ka mid ah dhismayaasha Dr Makumbe ugu quruxda badan ee Yurub oo dhan. Oo haddii aan ku filan, Bruges ku faantaa qaar ka mid ah ugu delicious shukulaatada handmade!
Marka socday ka Amsterdam in Bruges, waxaad si fudud u awooddo tago tareen. safarka oo dhan waa mid aad u raqiis ah, oo waxay idiin qaadan doonaa wax ka yar saddex saacadood in ay gaaraan magaalada sixir.
Amsterdam si Tareenadu Bruges
Brussels si Tareenadu Bruges
Antwerp in Tareenadu Bruges
Ghent in Tareenadu Bruges
3. Hague: Aadan awoodin Miss Waxaa!
Out of dhan safarada maalinta ka Amsterdam oo aad qaadi karto, Hague waa mid waa in aan la seegay. Sababta ugu weyn ayaa ah xaqiiqda ah in Hague ay ka mid tahay magaalooyinka ugu muhiimsan Netherlands. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan.
Mid ka mid ah waa in aan u baahan tahay sababo dheeraad ah oo booqanaya. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad ogaato wax dheeraad ah, in aad la socoto in Hague uu yahay mid aad u dhow Amsterdam. The tareen kortaan kaliya qaadataa qiyaastii hal saac iyo waa mid aad u raqiis ah.
Hague waa fadhiga dhexe ee dawladda ee Nederland, si aad u rajeynayaan in ay arkaan wax badan oo ka mid ah dhismayaasha cajiib ah. Magaaladu waxay sidoo kale waa meel ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, taas oo kale waa in la arkaa meel.
Dhamaadka, marka aad gaarto Hague, loo hubiyo in ay booqdaan Madurodam. Waxaa la Ghadafi a dhigan doonaa inaad ugu xaqiiqo ah u sujuuda.
Brussels si The Hague Tareenadu
Antwerp si The Hague Tareenadu
Ghent si The Hague Tareenadu
Brugge si The Hague Tareenadu
4. Cologne: An Gem Inta badan geftay Of Germany
Germany waa dal leh magaalooyin badan la yaab leh ka buuxsamay. Si kastaba ha ahaatee, dhif ah dadka ka fiirsan inta badan oo ka mid ah mid ka mid ah safarada maalin ka Amsterdam.
Inkastoo in uu yahay kiiska, Germany ayaa weli waxaa haboon booqanaya. Taasi waa run gaar ahaan haddii aad go'aansato in aad si Cologne tago, jawharad ah inta badan illowday ee West Germany. The been weyn magaalada on the bangiyada oo ka mid ah si isku mid heer sare ah Rhine River. Waa maxay more, Cologne waa xarunta dhaqaalaha, dhaqanka, iyo dalxiiska ee West Germany.
Haddii aad go'aansato in aad magaaladan yaab si ay u tagaan, waxaad yeelan doontaa kun oo sano oo taariikhda si ay u bogi. Bartamaha magaalada dhexdeeda a kaniisad weyn. Waa mid ka mid ah ugu meelo cajiib ah cibaadada waxaad ka heli doontaa si aad u aragto oo dhan of Europe.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan Cologne waa in ay tahay oo kaliya ku dhawaad ​​saddex saacadood iska via tareenka. Sidaas, haddii aad go'aansato inuu halkaas tago safarka maalintii, miyaad magaalada oo gaari doonaa in wax waqti ah.
Berlin si Tareenadu Aachen
Frankfurt inay Tareenadu Cologne
Dresden in Tareenadu Cologne
Aachen in Tareenadu Cologne
5. Trip Day Si Paris From Amsterdam: Waa maxay More Si Waxaad Dhahdaa?
safarada tareen ka Amsterdam in Paris in ay aad u dheer loo isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, sida soo daahay, waxay kaliya ku dhawaad ​​saddex saacadood ee la soo dhaafay, samaynta Paris meel fiican ee mid ka mid ah aad maalin safarada laga Amsterdam.
Caan ku tahay matxafyada farshaxanka ay, naqshadaha, iyo cunnada, Paris waa mid ka caga in uma baahna barasho. Waxaa jira in yar oo in la yiri magaalo caan this in dheeraad ah waxaa laga yaabaa romanticize ama kugu sasabo oo ku saabsan.
From Tower Eifel si Versailles, Paris waxaa buuxiyeen ilaa girgirka la meelaha ay soo booqdaan iyo waxyaalaha ay sameeyaan. Magaalada iftiin iyadaa ugu caansan dunida oo dhan, oo aynu wada ognahay sababta. Sidaas, ma dayacno aad reading waqtiga ku saabsan oo kaliya halkaas tago!
Kuwani shan safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Amsterdam hubin in aad fasax la ilaawi karin, iyo sababta oo ah waxay dhan yihiin si fudud Ieexdo tareen, aad qabto cudur daar lahayn in aan booqasho marka aad ku sugan tahay Europe!
Oo, haddii aad qabto wax su'aalo ah, si xor ah u soo xiriir Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Saffarada Day From Amsterdam By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-amsterdam/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / fr ama / es iyo luuqado badan.
Daytrips europetravel tareen safarka travelamsterdam travelbelgium travelengland travelgermany travelnetherlands travelparis
My qoraal blog waa habka ugu fudud si aad u hesho heer sare khuseeya, cilmibaaris, iyo xirfad content qoraal ah, Waxaan isku day in aad ka dhigi doonaa sida ku hawlanaa sidii aan suurto gal kartaan. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Sahaminta The Best daahfurtay Iyadoo College asxaabtiisa
Safarka tareenka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Sida loo Noqo A High-Flying Travel Influencer
Tilmaamaha Tareenka Safarka
7 Bachelor-ka Ugu Fiican Iyo Safarada Bachelorette Ee Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
10 Goobaha Fasaxa ugu Fiican oo leh Maxkamadaha Basketball -ka Weyn
10 Goobaha Safarka ee Xilliga Ka-baxsan Adduunka oo dhan
Waa Maxay Xusuus -qorka Laga Keeno Safar?
12 Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub
10 Inta badan Koorsooyinka Golf -ka ee Muuqaalka Yurub